Frozen Meat Factory - China Frozen Meat Vagadziri, Vatengesi
Chigadzirwa sumo Zvishandiso zvinobva kunzvimbo dzekuuraira uye mabhizimusi ekunyoresa kunze kwenyika kuChina. Kunze mbishi zvigadzirwa kunyanya kubva kuFrance, Spain, iyo Netherlands yakatarwa Slice nemadhizai, pfeka tambo maficha Iyo reshiyo yemafuta kusvika kuonda ndeye 3: 7, mafuta asi asina mafuta. Nyorera chiteshi Inokodzera kugadzira chikafu, cheni yekuresitorendi nemamwe maindasitiri. Kuchengetera mamiriro Kuchengetedza kwepasi pazasi -18, Instant kutonhora system. Iyo CAS inotonhora sisitimu inosanganiswa yedyn ...
Chigadzirwa sumo Zvishandiso zvinobva kunzvimbo dzekuuraira uye mabhizimusi ekunyoresa kunze kwenyika kuChina. Zvinhu zvakaunzwa kunze kwenyika zvinonyanya kubva kuFrance, Spain, Netherlands, nezvimwewo zvimwe zvinotsanangurwa, gamuchira zvimiro zvetsika Chiyero chemafuta kutetepa ndi3: 7, chakakora asi chisina mafuta. Nyorera chiteshi Inokodzera kugadzira chikafu, cheni yekuresitorendi nemamwe maindasitiri. Kuchengetedza mamiriro Kuchengetedzwa kwepasi pasi -18 meat Nyama yakagwamba inoreva nyama yakaurayiwa, pre-c ...
Chigadzirwa sumo Zvishandiso zvinobva kunzvimbo dzekuuraira uye mabhizimusi ekunze akanyoreswa muChina. Kunze mbishi zvigadzirwa zvinonyanya kubva kuNew Zealand neAustralia. tsananguro Zvimwe zvinotsanangurwa, gamuchira zvimiro zvetsika Nyorera Chiteshi Inokodzera kugadzira chikafu, cheni yekuresitorendi nemamwe maindasitiri. Kuchengetera mamiriro Kuchengetedza kwepasi pazasi -18, Instant kutonhora system. Iyo CAS inotonhora sisitimu inosanganisa ine masimba magineti munda uye isingachinjike magineti munda, ...
Chikafu chakaomeswa chakakamurwa kuita chikafu chakatonhora uye chikafu chakaomeswa. Chikafu chakaomeswa chiri nyore kuchengetedza uye chinoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa, kutakurwa uye kuchengetwa kwechikafu chinoparara senyama, huku, zvigadzirwa zvemumvura, mukaka, mazai, miriwo nemichero; zvine hutano, zviri nyore, zvine hutano uye zvine hupfumi; Iko kudiwa kwemusika kwakakura, inobata chinzvimbo chakakosha munyika dzakabudirira, uye iri kukura nekukurumidza munyika dzichiri kusimukira. Chilled chikafu: haidi kuve nechando, ndiyo ...
Chigadzirwa sumo Zvishandiso zvinobva kunzvimbo dzekuuraira uye mabhizimusi ekunyoresa kunze kwenyika kuChina. Kunze mbishi zvigadzirwa kunyanya kubva kuFrance, Spain, iyo Netherlands yakatarwa Slice nemadhizai, pfeka tambo maficha Iyo reshiyo yemafuta kusvika kuonda ndeye 3: 7, mafuta asi asina mafuta. Nyorera chiteshi Inokodzera kugadzira chikafu, cheni yekuresitorendi nemamwe maindasitiri. Kuchengetera mamiriro Kuchengeterwa pazasi -18 ℃ Yakavharirwa Nzira Yechando Iyo firimu-yakaputirwa chando nzira, iyo CPF yakasangana ...
Chigadzirwa sumo Zvishandiso zvinobva kunzvimbo dzekuuraira uye mabhizimusi ekunyoresa kunze kwenyika kuChina. Zvinhu zvakaunzwa kunze kwenyika zvinonyanya kubva kuFrance, Spain, Netherlands, nezvimwewo zvimwe zvinotsanangurwa, gamuchira zvimiro zvetsika Chiyero chemafuta kutetepa ndi3: 7, chakakora asi chisina mafuta. Nyorera chiteshi Inokodzera kugadzira chikafu, cheni yekuresitorendi nemamwe maindasitiri. Kuchengetedza mamiriro Kuchengetedzwa kwepasi pasi -18, Bio-inotonhora mapuroteni tekinoroji Biological yakaomeswa nechando protein ...